म २८ बर्षकी भनौँ वा को, पुरुष–भनौँ या महिला मसँग लिङ्ग र योनी दुबै छ दुबैमा सेक्स गर्न मन लाग्छ… – Nepali Audio Video
३) के अन्तर्लिङ्गीहरू उभयलिङ्गी(Hermaphrodites) हुन्?
४)अन्तर्लिङ्गीको स्वभाव पुरुषको जस्तै हुन्छ कि महिलाको जस्तै? अनि उनीहरूको आकर्षण को प्रति हुन्छ?
५) के अन्तर्लिङ्गी हुनु एउटा असामान्यता वा रोग हो?
६) कोही अन्तर्लिङ्गी भएको कसरी थहा पाउने?
७) अन्तर्लिङ्गी भनेको त यौन विकासका विकार(Disorders of Sex Development) भन्छन् रे!
८) अन्तर्लिङ्गी बच्चाहरूमा शल्यक्रिया गरेर सामान्य बाउन सकिन्छ रे!
९) त्यस भए अन्तर्लिङ्गी व्यक्तिहरूलाई दाइ/दिदी वा कुन शब्दको प्रयोग गर्ने?
१०) शौचालयको व्यवस्था कस्तो हुनु पर्छ?
११) यस्तो वाहियात कुरा पहिले कहिल्यै सुन्या थिएन। अहिले आएको नयाँ जीव हो?
५) पारलिङ्गी पुरुष (Transgender man) कस्तालाई भनिन्छ?
६) Agender भनेको के हो?
७) Bigender भनेको के हो?
६) Androgyne भनेको के हो?
७) Gender Fluid भनेको के हो?
५) यो एउटा जीवन शैली हो। पहिला पहिला त यो द्वीलिङ्गीका बरेमा सुनिदैनथ्यो। अहिले मात्र यस्तो कुरा सुन्न पाइरहेका छौँ। यो पाश्चात्य संस्कृतिको प्रभाव हो। बरु विपरीतलिङ्गी वा समलिङ्गी प्राकृतिक होलान् तर यो द्वीलिङ्गी भनेको आफ्नो यौन प्यासलाई फस्ट्याउन मात्र बनेको हो!